पनडुब्बी छिटो पहिले नै प्रथम विश्व युद्ध को समयमा विभिन्न देशहरूको नौसेना को भाग भयो। पनडुब्बी को क्षेत्र मा विकास कामहरू यसको सुरुवात अघि लामो थाले, तर केवल पछि सन् 1914 को अंतिम रूप पनडुब्बी जहाजहरू को छिटो व्यवस्थापन प्रदर्शन विशेषताहरु लागि आवश्यकताहरू थिए। तिनीहरूले सञ्चालन गर्न सक्छ जसमा मुख्य अवस्था, चुपके थियो। संरचना मा द्वितीय विश्व युद्ध को पनडुब्बी जहाजहरू र कार्य को सिद्धान्त अघिल्लो दशकमा आफ्नो predecessors देखि सानो भिन्नता थियो। संरचनात्मक फरक सामान्यतया प्राविधिक नवाचारै मा शामिल छ र केही एकाइहरु र एग्रिगेट को 20s र 30 सेकेन्ड मा आविष्कार navigability विशेषताहरु र जाँगरको सुधार।
युद्ध अघि जर्मन पनडुब्बी जहाजहरू
सर्तहरू भर्साइल्लेज को सन्धि जर्मनी जहाज को धेरै प्रकार निर्माण गर्न र पूर्ण-fledged नौसेना सिर्जना गर्न अनुमति थिएन। पूर्व-युद्ध अवधिमा, उपेक्षा 1918 मित्र सीमा मा देशहरूमा लगाएको, जर्मन जहाज बनाउने ठाउ तैपनि पन्ध्र समुद्र वर्ग पनडुब्बी जहाजहरू (यू-25, यू-26, यू-37, यू-64, आदि) मा शुरू। सतह मा आफ्नो विस्थापन बारेमा 700 टन थियो। सानो पनडुब्बी जहाजहरू (500 टन) 24 टुक्रा को मात्रा मा। (सांख्यिक यू-44) प्लस दायरा-तटीय coasting 32 एकाइहरु नै थिए र एक विस्थापन शक्ति Krigsmarine समर्थन comprised। ती सबै सशस्त्र धनुष साधन र torpedo ट्यूब (सामान्यतया4धनुष र कडी 2) थिए।
तसर्थ, धेरै बन्देज उपाय बावजुद, 1939 द्वारा, जर्मन नौसेना एकदम आधुनिक पनडुब्बी जहाजहरू शामिल साथ सशस्त्र। द्वितीय विश्व युद्ध तुरुन्तै यसको शुरूआत पछि हतियार को यो वर्ग को उच्च प्रभावकारिता देखाइएको छ।
ब्रिटेन मा प्रयासहरू
ब्रिटेन हिटलर गरेको पहिलो झटका लाग्यो युद्ध मिसिन। अनौठो पर्याप्त, साम्राज्य को नौसेनापति सबैभन्दा उच्च जर्मन BattleShips र cruisers खडा खतरालाई मूल्यांकन। अघिल्लो ठूलो मात्रा संघर्ष को अनुभव मा, तिनीहरूले पनडुब्बी कवरेज एक अपेक्षाकृत संकीर्ण तटीय पट्टी सीमित हुनेछ, कि र आफ्नो पत्ता लगाउने समस्या धेरै हुने छैन कल्पित।
यो द्वितीय विश्व युद्ध को जर्मन यू-डुङ्गा सतह छिटो भन्दा टाढा थप खतरनाक हतियार हुन सक्ने तथापि, बाहिर गरियो। उत्तरी तट को एक नौसेना घेरा स्थापना गर्न प्रयास असफल भयो। युद्ध जहाज को पहिलो दिनमा "Athenia" त्यो torpedoed र विमान वाहक "Koreydzhes" 17 सेप्टेम्बर, ब्रिटिश ASW को प्रभावकारी माध्यम रूपमा प्रयोग गर्ने आशा जो विमान sank थियो। कार्य ब्लक "ब्वाँसो पैक" एडमिरल लुसिफरको व्यवस्थापन गर्न सकिएन, तिनीहरूले थप साहसी काम गरेका छन्। अक्टोबर 14, 1939 को पनडुब्बी यू-47 Scapa प्रवाह मा शाही नौसेना आधार को पानी मा भयो, र एक सतह बाट स्थिर जंगी जहाज "रोयलओएक" torpedoed। अदालत हरेक दिन मृत्यु भयो।
लुसिफरको तरवार र ढाल ब्रिटेन
1940 द्वारा, जर्मन दुई लाख भन्दा बढी टन को कुल tonnage संग अंग्रेजी जहाज तल जान अनुमति थिए। यसलाई ब्रिटेन अपरिहार्य विनाश हो भनेर देखिन्थ्यो। भूमिका बारे बताउन इतिहासकारहरूले इतिहास गर्न चासो द्वितीय विश्व युद्ध को पनडुब्बी जहाजहरू प्ले। फिल्म "एटलांटिक युद्ध" warring देशहरूमा आपूर्ति गयो जो समुद्र राजमार्ग को बेडे, नियन्त्रण लागि संघर्ष को कथा बताउँछ। को "ब्वाँसा" लड्न लुसिफरको गाह्रो थियो, तर हरेक चुनौतीपूर्ण कार्य fraught निर्णय, र यो यस समयमा पाइन्छ। राडार को क्षेत्र मा उपलब्धिहरू जर्मन पनडुब्बी जहाजहरू, शून्य दृश्यात्मक मा नेत्रहीन मात्र, तर पनि पत्ता लगाउन, र दूरी मा हुनेछ।
दोस्रो विश्व युद्ध अझै यसको शिखर चरण, पुग्यो थिएन अप्रिल 1941 मा भएको थियो, तर पनडुब्बी यू-110 द्वारा sunk थियो। त्यो हिटलर झगडा सुरु कोसँग ती अन्तिम बाचेको व्यक्ति थियो।
एक स्नोर्कल के हो?
पनडुब्बी जहाजहरू डिजाइनर को धेरै शुरू देखि शक्ति को विभिन्न embodiments शक्ति बोट आपूर्ति छलफल गरेका छन्। द्वितीय विश्व युद्ध को पनडुब्बी जहाजहरू, एक विद्युत मोटर द्वारा संचालित छ, र सतह मा - एक डिजेल इन्जिन। मुख्य समस्या गुप्ति को संरक्षण hindering, ब्याट्री Recharge गर्न समय समयमा निकाल्ने आवश्यकता थियो। यो बाध्य unmasking पनडुब्बी जहाजहरू कमजोर छन् समयमा तिनीहरूले विमान र radars पत्ता लगाउन सक्छ थियो। यो जोखिम कम गर्न, यो तथाकथित स्नोर्कल आविष्कार। यो एक डिजेल खण्ड इन्धन को दहन लागि आवश्यक वायुमण्डलीय हावा प्रवेश र हटाउँदछ जो मार्फत एक Extendable पाइप सिस्टम छ निकास ग्याँसहरु।
आवेदन स्नोर्कल पनडुब्बी जहाजहरू घाटा कम मदत, तर साथै यस्तो सोनार रूपमा radars र पत्ता लगाउने को अन्य साधन थिए।
अभिनव उपेक्षित छोडिएको
को स्पष्ट लाभ भए तापनि स्नोर्कल मात्र सुसज्जित द्वितीय विश्व युद्ध को जर्मन यू-डुङ्गा। सोभियत संघ र अन्य देशहरूमा हुनत ऋणबाट अनुभवको लागि अवस्थाको थिए, उपेक्षित आविष्कार यो छोड्नुभएको छ। यो पहिलो डच shipbuilders एक स्नोर्कल प्रयोग विश्वास छ, तर हामी पनि इटालियन सैन्य इन्जिनियर Ferretti द्वारा डिजाइन 1925 समान उपकरणहरू जान्न, तर त्यसपछि यो विचार त्यागेर थियो। 1940 मा, नेदरल्यान्ड द्वारा आक्रमण भएको थियो नाजी जर्मनी, तर यसको पनडुब्बी छिटो (4 एकाइहरु) बेलायत छोड्ने थियो। त्यहाँ पनि, हामी यो कदापी इच्छित उपकरण मूल्यांकन गरेनन्,। स्नोर्कल तिनीहरूलाई धेरै खतरनाक र संदिग्ध उपयोगिता उपकरण विचार, dismantled।
अन्य क्रान्तिकारी प्राविधिक समाधान पनडुब्बी जहाजहरू बिल्डर्स प्रयोग गर्नुभएन। ब्याट्री, तिनीहरूलाई चार्ज लागि उपकरण सुधार सुधार हावा पुनर्जनन प्रणाली, तर सिद्धान्त अपरिवर्तित पनडुब्बी उपकरण रहनेछ।
द्वितीय विश्व युद्ध, सोभियत संघ को पनडुब्बी जहाजहरू
फोटो नायक severomortsev Lunin, Marinesco, Starikov विदेशी पनि मात्र होइन सोभियत समाचार पत्र मुद्रित, तर। Submariners वास्तविक नायक थिए। साथै, सोभियत पनडुब्बी जहाजहरू सबैभन्दा सफल कमान्डरहरु एडल्फ हिटलर को व्यक्तिगत शत्रुहरू भयो, र तिनीहरूलाई को राम्रो पहिचान आवश्यक छैन।
कि उत्तरी समुद्र र काला सागर बेसिन मा raged को नौसेना युद्धमा एक विशाल भूमिका, सोभियत पनडुब्बी जहाजहरू प्ले। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 मा शुरू भयो, र 1941 मा, नाजी जर्मनी को सोभियत संघ आक्रमण। त्यतिबेला धेरै आधारभूत प्रकार शामिल हाम्रो छिटो पनडुब्बी युद्घ सामांग्री मा:
PL "Decembrists"। श्रृंखला (शीर्षक थप दुई एकाइहरु बाहेक - "Narodovolets र" रातो ") मा 1931 मा स्थापित। पूर्ण विस्थापन - 980 टन।
"एल" श्रृंखला - "लेनिनवादी।" मस्यौदा 1936 साल विस्थापन - 1400 टन, जहाज सशस्त्र छ बारूद torpedoes 12 र 20 मा Tas समुद्र बारुद, दुई बन्दुक (नाक - 100 मिमी र forage - 45 मिमी)।
"आर-XIII» श्रृंखला 1200 टन को एक विस्थापन संग।
580 टन को एक विस्थापन संग "नी" ( "पाइक") को श्रृंखला।
100 मिमी र 45 मिमी - "सी" 780 मिटर, एक छ-सशस्त्र TA र दुई बन्दुक को श्रृंखला।
"K" श्रृंखला। विस्थापन - 2200 टी विकास 22 छलछामको गाँठो (सतह स्थिति) र 10 छलछामको गाँठो को गति, 1938 godu पनडुब्बी मा विकसित (पानी स्थिति।)। नाउ समुद्र वर्ग। छ सशस्त्र torpedo (6 TA नाक र फिड 4)।
"एम" श्रृंखला - "बेबी"। विस्थापन - 200 250 गर्न पु देखि (आधारमा परिमार्जन मा)। परियोजनाहरू 1932 र 1936, TA 2, स्वतन्त्रता -2हप्ता।
पनडुब्बी जहाजहरू "एम" श्रृंखला सबैभन्दा संकुचित द्वितीय विश्व युद्ध सोभियत संघ को यू-डुङ्गा छन्। फिल्म "सोभियत नौसेना। विजय क्रनिकल "धेरै crews महिमाको बाटो को कथा कौशलतासाथ आफ्नो सानो आकार संग मिलेर अद्वितीय ह्यान्डलिङ यी जहाज को विशेषताहरु प्रयोग बताउँछ। कहिलेकाहीं कमान्डरहरु चुपचाप राम्ररी सुरक्षित शत्रु आधार नजिक प्राप्त र सतावट टाढा प्राप्त गर्न व्यवस्थित। "बेबी" काला सागर र सुदूर पूर्व रेल र फ्लोट द्वारा ओसारपसार गर्न सकिन्छ।
छोटो स्वतन्त्रता, स्टक, cramped र चालक दल को केहि सम्बन्धित सेवा अरोचक अवस्था को अभाव मा मात्र दुई torpedoes: "एम" को एक श्रृंखला को लाभ संग एक बराबरीको मा पाठ्यक्रम र बेफाइदा को थियो, तर तिनीहरूलाई बिना कुनै उपकरण छ पुरा छ। यी कठिनाइहरु वीर submariners शत्रु माथि एक प्रभावशाली विजय जीत रोकियो छैन।
द्वितीय विश्व युद्ध को पनडुब्बी जहाजहरू युद्ध अघि विभिन्न देशहरूको navies संग सेवामा थिए जसमा रोचक रकम। पाँचौ, बेलायत (69) - 1939 को रूप मा, पनडुब्बी जहाजहरू को सबै भन्दा ठूलो छिटो सोभियत संघ (। 200 पीसी), उहाँले (एक सय एकाइहरु भन्दा बढी) शक्तिशाली इटालियन पनडुब्बी छिटो द्वारा सफल भएको थियो, तेस्रो स्थान फ्रान्स द्वारा (। 86 पीसी) कब्जा भएको थियो, चौथो थियो - जापान (65) र छैटौं - जर्मनी (57)। युद्ध को पाठ्यक्रम मा शक्ति को ब्यालेन्स परिवर्तन, र (सोभियत पनडुब्बी जहाजहरू संख्या बाहेक) उल्टो क्रम मा सूची लगभग लहरै छ। साथै सोभियत नौसेना को बाँध्न हाम्रो पोत मा पानी मा कम गर्न र पनडुब्बी इस्टोनिया ( "Lembit", 1935) को अभिवृद्धि पछि बाल्टिक छिटो भाग बनेको इङ्गल्याण्ड, मा बनाइएको थियो।
युद्धमा तल जमीनमा, हावा मा, मृत्यु पानी र यसलाई अन्तर्गत। धेरै वर्ष को लागि, सोभियत "पाइक" र "बेबी" गृह देश रक्षा गर्न जारी, र त्यसपछि तिनीहरूले सैन्य विद्यालयहरूको नौसेना cadets प्रशिक्षण लागि प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूलाई केही स्मारक र संग्रहालयहरु, अरूलाई cemeteries पनडुब्बी जहाजहरू मा rusted छन् बनेका छन्।
युद्ध पछि गत दशकमा पनडुब्बी जहाजहरू, लगभग निरन्तर संसारमा ठाउँ लिइरहेका छन् कि शत्रुता भाग थिएन। त्यहाँ स्थानीय संघर्ष, कहिलेकाहीं गम्भीर युद्ध मा विकसित थिए, तर पनडुब्बी जहाजहरू काम लडिरहेका थिएनन्। तिनीहरूले अग्रिम धन्यवाद आणविक भौतिक असीमित स्वतन्त्रता प्राप्त थप secretive हुँदै गइरहेका छन्, चुपचाप र चाँडै सार्दा।
बख्तरबंद cruiser "Stormbreaker"। रूसी छिटो
कार्ल Veliky अगाडि राख्न लक्ष्यबाट के हुन्? बोर्ड को परिणाम
Nikon क्रनिकल: सूची र संरचना
को Rainier III, मोनाको को राजकुमार: जीवनी, बच्चाहरु
गठन र पेन्सन को पुन: गणनामा कसरी?
घुमक्कड "टाको"21 मा - आकर्षण र कार्यक्षमता को embodiment
हक्की खेलाडी Nikolai Zherdev - खेल क्यारियर र व्यक्तिगत जीवन
कसरी प्रतीक चयन गर्न हतियार एक परिवार कोट र परिवार आकर्षित गर्न
कसरी मिश्र उड गर्न?
अपरिभर गरिएको वसा। स्वादिष्ट व्यञ्जनको व्यञ्जन